I-Irmak Zonguldak Line Km: 378 + Egqithileyo kwi220 Isiphumo seThenda | RayHaber
ikhayayemnyama.IifandesiIINKCUKACHA ZEZITHILII-Irmak Zonguldak Line Km: I-378 + Igqitha kwi-220 Result Result
06 / 11 / 2019 IINKCUKACHA ZEZITHILI, yemnyama.Iifandesi
Iindlela zaseTurkey. ICandelo loMlawuli weNkonzo yokuThengwa kweeNkonzo (i-TCDD) i-2 / 2019 enexabiso le-496707 TL kunye nexabiso eliqikelelweyo le-8.962.794,07 TL yi-Irmak Zonguldak Line Km: 12.869.239,52 + 378 220 ingenise ithenda kwaye ingenisa ithenda ngokomphumo ongalungiswanga. I-ACAR iphumelele. Inkampani ye41, ethathe inxaxheba kwithenda, ingenisa ibhaso engezantsi komda.
Ithenda igubungela ubonelelo kunye nofakelo lwe130.985 × 40 mm iGrafti yentsimbi ye4 m Earthing (kubandakanya ukuthunyelwa) neminye imisebenzi. Ixesha lomsebenzi li-350 (amakhulu amathathu anamashumi amahlanu) eentsuku zekhalenda ukusuka kwindawo yokuhanjiswa.